Shayton Equilibrium Hypercar - Imagazini yoyilo
Hypercar I-Shayton Equilibrium imele i-hedonism ecocekileyo, ukugqwetha kumavili amane, ingcinga engathandekiyo kubantu abaninzi kunye nokufezekiswa kwamaphupha kuye kwabambalwa abanenhlanhla. Ifanekisa ulonwabo olupheleleyo, umbono omtsha wokuba usuka kwenye indawo uye kwenye, apho injongo ibaluleke khona njengamava. UShayton usekwe ukufumanisa umda wobuchule bezinto, ukuvavanya enye indlela eluhlaza kunye nezixhobo ezinokongeza ukusebenza ngelixa ugcina ubugqwirha behypercar. Isigaba esilandelayo kukufumana umtyalomali / kunye nokwenza i-Shayton Equilibrium ibe yinyani.
Igama leprojekthi : Shayton Equilibrium, Igama labayili : Andrej Stanta, Igama lomthengi : Shayton Automotive.
Izithuthi, ukuhamba kunye noyilo lokuhamba